Nin Hubaysan oo dhaqtar iyo boolis ku dilay magaalada Chicago ee Mareykanka – Radio Daljir
Nofeembar 20, 2018 4:42 b 0
Afar qof ayaa ku geeriyooday toogasho uu nin hubaysan uu ka gaystay isbitaalka magaalada Chicago ee Mareykanka, laba ka mid ah dadka geeriyooday ayaa ah haween shaqaalle ka ahaa isbitaalka, sarkaal boolis iyo qofka weerarka gaystay.
Labada ruux ee dumarka ah ayaa ahaa dhaqtar iyo kaaliye farmashiyeeste ah , sida uu xaqiijiyay duqa magaalada Chicago Rahm Emanuel .
Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay ninka hubaysan inuu ku geeriyooday rasaas la iswaydaarsaday, balse majirto cadaymo arrintaasi muujinaysa.
Saraakiisha ayaa sheegay ninka hubaysan inuu u muuqday mid bartilmaameedkiisu ahaa gabar uu horay xiriir uu ula lahaa, balse majirto wax xog dheeraad ah oo arrintaasi kusaabsan.
“Waxaa geeriyooday dhaqtar, caawiye farmashiyeeste iyo sarkaal boolis, oo dhamaantood shaqo maalmeedkooda ku jiray, waxa ayna hayeen shaqo ay ku faraxsanaayeen” ayuu yiri Rahm Emanuel .
Waxaa uu ku tilmaamay mid siwayn ay uga tiiraanyoodeen shacabka magaalada Chicago oo ah dhaqan shaydaan.
Guryo lagu gubay dagaalkii deegaanka Dhumay ee gobolka Sool (sawiro)